ONT any Orange - miasa ho ahy ihany ny Internet amin'ny farany! - SmartMe
Natokana ho an'i Grzesiek an'ny HejDom ity lahatsoratra ity. Izy no voalohany nanome fanazavana momba ny zavatra toy ny ONT any Orange, izay nahatonga ahy hanoratra an'ity torolàlana ity ho anao tamim-pitsikiana lehibe. Taorian'ny tolona sy ny hozatra roa taona dia afaka miteny aho amin'ny farany - Miasa ho ahy ny Internet!
Mba hahalalako bebe kokoa an'ity lesona ity dia mila manazava ny toe-javatra misy ahy aho izao. Manana trano amin'ny trano vaovao aho, izay eo am-pivoarana ankehitriny. Ny mpandrindra ahy sy ny indostria iray manontolo dia nanapa-kevitra ny hanao boaty router voatokana. Hetsika lehibe, sa tsy izany? Toa eny, saingy vy ilay boaty ... Vokatr'izany dia manana tranom-borona Faraday izahay ary mahantra kely ny kalitaon'ny tambajotra.
ONT any Orange, oh Orange izany
Ny fitiavako an'i Orange dia… sarotra. Amin'ny lafiny iray, izaho dia mpanjifany mahatoky nandritra ny 7 na 8 taona. Etsy ankilany, efa mandefa karatra krismasy amin'ny departemantan'ny fitoriana aho, satria miaraka aminao daholo ny olona any. Ilay Orange, ary Funbox 3.0 marina kokoa, dia nilatsaka tao anaty tranofiarako mahafinaritra, ary tavela niaraka tamin'ilay tanana ohabolana aho ... fantatrao hoe aiza.
Nandritra izay roa taona izay dia afaka nifampiraharaha tamin'ny fanamafisam-peo roa aho, saingy hatramin'ny nahatongavako teo amin'ny Biraon'ny trano an-jorony, izay misy triangle Bermuda, dia tsy ampy intsony io vahaolana io Ho fanampin'izay, rehefa nandrehitra ny fahitalavitra avy tany Orange aho dia niarahaba ahy matetika ilay écran - "Tsy misy fidirana amin'ny fantsona". Noraisiko izy io, noraisiko ilay mpandray ary nanapa-kevitra ny hanova ny fiainako aho. Fotoana fanamboarana Internet!
ONT any Orange
Inona ny ONT any Orange? Grail volamena toy izany. Fampiasana miafina izay tsy misy teknisianina afaka milaza aminao. Raha dinihina tokoa, fitaovana iray fotsiny io mamadika hazavana ho lasa varahina (alchemist tamin'ny taonjato faha-21). Toy ny fitsipika, rehefa mandefa Internet ho anao i Orange, dia tsy manome an'io fitaovana io, satria tsy ilaina izany. Na izany aza, rehefa hita fa mila izany ianao dia mila mandoa PLN 149 fanampiny. Amin'ny fikirakirana voalohany dia tsy misy io vidiny io, koa raha miatrika safidin'ny mpandraharaha ianao dia manoro hevitra anao aho mba hanontany mialoha raha manana tranom-borona tsara ho an'ny router ianao.
Tompokolahy, niseho tamin'ny andro faharoa ireo mpikarakara, izay nahagaga ahy ahy tsara. Tsotra ny resaka:
Installer: Salama, inona no mitranga?
Ariel: Tsy mandeha ny Internet - mila ONT aho
Installer: okay, okay - hojerentsika izay mitranga eo aloha.
Ariel: Tsy mandeha ny fahitalavitra, ONT no tadiaviko
Installer: Tsy mandeha ny fahitalavitra satria nampidirinao ao amin'ny Playstation ny tariby Internet anao, ary mankany amin'ny fahitalavitra ilay tariby avy amin'ny fanamafisam-peo
Ariel: Manao an'io izahay. Tsy milaza na inona na inona amin'ny vadiko ny Tompo, ary mbola maniry ny ONT aho.
Installer: Ok, miasa izahay.
Ny fametrahana ny ONT dia naharitra antsasak'adiny. Nandritra izany fotoana izany dia gaga ny fitters rehefa nikatona irery ho azy ireo ny vavahady marani-tsaina ... Rehefa avy nampidirina tao anaty boaty ny ONT, izany hoe ilay fitaovana ampiarahinay amin'ny fibre optika amin'ny lafiny iray, ary ny tariby varahina ny iray hafa, azontsika atao ny mamindra ny router amin'ny toerana mety kokoa.
Nidina ny router
Nidina tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ny router, teo akaikin'ny boaty ambony TV. Ny kalitaon'ny tambajotra dia nitsambikina mafy. Nampiasako ireo famerenako WiFi roa ary rehefa afaka minitra vitsy dia feno ny tambajotram-pifandraisana 2.4 GHz sy 5 GHz aho nanerana ny trano. Ny andro talohan'izay, tamin'ny dimy tao amin'ny efitrano fandrian, afaka nanonofy aho.
Naharitra adiny iray teo ho eo ny hetsika manontolo ary nandany ny vidiko PLN 150. Vokany? Izay nangatahiko tokoa ... Mazava ho azy fa mikasa ny hisolo ny router aho tsy ho ela, saingy misy dikany ihany izany amin'ny farany. Ka raha manana olana amin'ny Internet any Orange ianao dia antenaiko fa hanampy anao hamaha azy ireo ity lahatsoratra ity! Tena mora sy haingana, ary raha ataonao eo no ho eo dia maimaimpoana mihitsy 😉